Olima egwurugwu isii nnọchibido mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Olima R6S mbanye anataghị ikike
Anyị egwurugwu isii Gburugburu Olima mbanye anataghị ikike bụ zuru okè n'ihi na onye ọ bụla nke na-achọ uru!
Hụ ihe ọ dị ka ịchị ndị iro na egwurugwu isii ịgba gburugburu! Zụta Igodo nke Ubọchi iji nweta ohere
Can nwere ike mbanye anataghị ikike n'ihi na ọbụna ogologo ma ọ bụrụ na-amasị gị, ihe niile ị na-eme bụ ịzụta a 1-Izu Key!
Offọdụ n'ime ndị ọrụ anyị raara onwe ha nye aghụghọ, nke chọrọ oku 1-ọnwa.
Ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ anyị tinyere n'ime Olima Rainbow Six Siege mwepụta na-atụ ụjọ, ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ mgbe ị tụlere etu ngwa ọrụ anyị ga-esi dị ọnụ. Keyzụta igodo ngwaahịa taa wee hụ maka onwe gị!
Rainbow Six Gburugburu Olima mbanye anataghị ikike Ozi
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege abụghị ụdị egwuregwu ụmụaka na-eto eto nwere ike iburu ma kpọọ, ebe nke a bụ egwuregwu kachasị mma maka ụmụ nwoke toro eto (na ụmụ nwanyị!). Y’oburu na ichoro ihe ngbawa obi nke gha eme ka iju ajuju na ndu ya, igodu n’ebe kwesiri gi! Iji anyị RB6 mbanye anataghị ikike ga-etinye gị n’ọnọdụ iji merie egwuregwu ndị ọzọ, mana kedu ka ihe niile si arụ ọrụ? Zuru oke maka ndị na-eji Windows 10, ị nwere ike ịdabere na Gamepron iji mee ka gị na ndị aghụghọ ọkachamara kachasị nwee ike. Ọ bụrụ n’ịchọrọ mma, ị chọtala ya.
Anyị nwere ngwaọrụ niile dị mkpa iji chịkwaa na egwurugwu isii - ma ọ bụ RB6 Wallhack ma ọ bụ Aimbot, ọ nweghị onye nrụpụta ọzọ na-eme ya nke ọma. Anyị etinyekwara ihe ndị dịka Enemy ESP, Ozi (Health, Tags, Name, Shield), Item ESP na nhọrọ ndị ọzọ dị ka Aimbot Checks.
Ozi iro: (Health, aha mkpado, ọta)
Aimbot na ndenye ego
Banyere egwurugwu isii Olima
Iji anyị RB6 Olima mbanye anataghị ikike bụ ihe ngwọta zuru oke maka onye ọ bụla na-enweghị nkà achọrọ iji soro "ọsụsọ". Ọ bụ ezie na egwuregwu vidio kwesịrị ịbụ ahụmịhe izu ike, enwere ọtụtụ ndị raara ndụ ha niile ka ha bụrụ ezigbo mmadụ; ọ bụ ezie na ha nwere nkà, ha agaghị enwe ike ịlụ ọgụ megide
ụdị nke anyị RB6 Aimbot na Wallhack. Ndị aghụghọ dị mfe ma kwụ ọtọ, na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị mma maka ndị mbido na ndị agha ochie! Ọ bụ ihe na-egosi, n'ihi ya ị nwere ike igwu n'ihu ọtụtụ puku mmadụ na-enweghị nchekasị - nke a bụ mbanye anataghị ikike nke na-anaghị abịa na HWID spoofer.
Gini kpatara iji Rainbow Six Olima nye ndi ozo?
Ahụhụ site na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eweta bụ ihe gara aga, ebe ị nwere ike ịtụkwasị obi na Gamepron iji nyefee oge ọ bụla. Gaghị enweta ngwaahịa na-enweghị isi, ebe anyị rụsiri ọrụ ike ịmalite ịmalite ịmepụta nhọrọ dị ala ugbu a! Anyị chọrọ ka ndị ọrụ anyị nwee okwukwe na ngwa ọrụ ọ bụla nke Gamepron nyere, ma ọ bụ maka egwurugwu isii ma ọ bụ aha ọ bụla ọzọ! Nke a cheat dị mfe iji na atụmatụ a “Olee otú Jiri” ndu na ike a ga-agbaso mgbe ị na-aha iji Loader. Aghọtaghị onwe onye aghụghọ na-agaghị achọta iji.
Nchịkọta nhọrọ anyị n'ime egwuregwu bụ nke ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe nke ukwuu, ebe anyị tufuru ọgba aghara ndị mmepe ndị ọzọ na-ahapụ. Ọ bụghị naanị na ị ga - eji egwurugwu egwurugwu isii nke mbanye nwere ihe ndị kachasị mma gụnyere, mana in-game menu na-eme ka ịhazie ahụmịhe gị ka ikuku. Soro ọtụtụ puku mmadụ na-ekiri ma gbanwee ntọala gị ngwa ngwa site na iji menu egwuregwu anyị, ebe ha na-enweghị ihe ọ bụla na-eme! Ha na-ekwu na hacking na sneakiest n'ụzọ kwere omume bụ mgbe niile mma, nke bụ ya mere Gamepron lekwasịrị anya idebe ndị ahịa anyị na-amaghị aha mgbe ịghọ aghụghọ ule.
Ekwela ka ndị egwuregwu ndị ọzọ na-akwa emo maka ịdị adị gị ma nweta ụgwọ ọrụ! Anyị Rainbow Six Siege Olima eji Aghọ Aghụghọ Ule, e nwere mmadụ ole na ole n'ụwa ga-enwe ike kenha na gị (na anyị ngwaọrụ!).
Nweta mmeri nke egwurugwu egwurugwu isii gị site na iji GamePron taa
Njikere Na-achị na anyị R6S Olima mbanye anataghị ikike?